Umzi mveliso weRibhoni-Abavelisi beRibhoni baseChina kunye nababoneleli
Iiribhoni zisetyenziswa ngokubanzi njengeyona ndawo ibalulekileyo yeembasa. Iiribhoni zinokubonelelwa ngezinto ezahlukeneyo ezinje nge-polyester, ukuhambisa ubushushu, iphothiwe, i-nylon njl.Kuxhomekeka kukhetho lomthengi kunye nendlela ilogo emele yenziwe ngayo. Ukuba ilogo inemibala ephelelweyo, imisila yenkomo egqithisileyo yobushushu ikhethwe ikakhulu ngenxa yexabiso layo, kodwa umphezulu wayo uthambe ngakumbi. I-logo kwi-polyester yenkomo yenkomo ihlala iphrinta i-silkscreen okanye i-CMYK yoshicilelo. Imisila yenkomo ephothiweyo okanye yenayil ayisoloko ikhethwa kuthathelwa ingqalelo indleko iyonke. Ubungakanani obuqhelekileyo beerbhoni ngu-800mm ~ 900mm. Ngamanye amaxesha abathengi bakhetha ubude obude, bamkelwe. Ngaphandle kwezinto ezibonakalayo kunye neempawu zayo, enye inxalenye ebalulekileyo yeerbhoni ngumgangatho wokuthunga. Ukudibanisa neembasa, inokuba ithungwe ngo-V okanye ithungwe ngo-H. Ukuthungwa kwe-H akudingi zixhobo zentsimbi, ngelixa i-V ethungiweyo ifuna iringi yeribhoni kwaye itsibe iringi ukudibanisa iiribhoni kunye neembasa. Umgangatho wokuthunga ugqityiwe ngabasebenzi abanamava, abanokuqinisekisa umgangatho wokuthunga ogqwesileyo. Njengomboneleli wobungcali wesipho sokukhuthaza, sinokubonelela ngeemveliso ezisetiweyo kubandakanya ukupakisha. Nokuba ungasidibanisa njani ukuthenga iiribhoni kuphela okanye ukuthenga yonke imveliso kubandakanya neembasa, zombini zamkelekile. Silapha ukuze silinde imibuzo yakho.